Amarekhodi aseBritish Open Scoring Records (72, 18 ne-9 Holes)
I- British Open , eyasungulwa ngowe-1860, ngowona mdala kunabo bobukhulu bechophiswano obuncinane begolfu lobugcisa bezimadoda kwaye uye waba ngumlinganiselo wegolfers ukususela kumqhubi walo wokuqala.
Ziziphi iirekhodi zamanqaku kwiqonga elidala kunabo bonke begalufu? Siza kujonga ngaloo ndlela ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanywa amanqaku angama-72 emigqabantshintshi (inkohlakalo yesibini kunye nezibetho phantsi kwe-par), kunye neirekhodi ezingama-18 kunye ne-9-hole.
IiRekhodi zokuGcina iiHole ezingama-72 kwiBritish Open
Okwangoku, u-Henrik Stenson ubamba irekhodi lemilinganiselo yokugqiba esezantsi, zombini ukubetha okupheleleyo kunye nokubethelwa ngokubhekiselele kwi-par. Wabeka iirekhodi ngexesha le-2016 eBritish Open. Amanqaku okuphumelela kukaStenson yayingu-264, eyayineminyaka engama-20-ngaphantsi kwinqanaba le-golf le-71 kulo nyaka.
Ngaphambili, i-Tiger Woods yabamba irekhodi ngo-19-ngaphantsi, efika kwii-269 izibetho ukugqiba nokuphumelela i-British Open Open ngo-2000, kwaye wasondela kwakhona ngo-2006 kodwa wagqiba ngo-18-ngaphantsi kwendawo.
Nazi ezo zintlu zabadlali abaphezulu:
I-72-Hole Stroke Totals ephantsi
264 - uHenrik Stenson, uRoyal Troon, ngo-2016
267 - UGreg Norman , uRoyal St George, ngo-1993
268 - iNick Price , Turnberry, 1994
268 - iJordan i-Spieth, i-Royal Birkdale, ngo-2017
269 ​​- iTiger Woods , St Andrews, 2000
Iziphumo eziPhezulu kakhulu kwiSiqendu
20-ngaphantsi - uHenrik Stenson, uRoyal Troon, ngo-2016
I-under-Tiger Woods, i-St Andrews, 2000
18-ngaphantsi - uNick Faldo, St Andrews, 1990
18-ngaphantsi kwe-Tiger Woods, eHoylake, ngo-2006
I-18-Hole kunye ne-9-Hole Records
Kuthiwani ngerekhodi elikwi-one-round score in the Open Championship? Kwaye amanqaku amahle angama-9 angabhalwa?
Kwiminyaka, irekhodi le-18-hole laliyi-63, elokuqala libhalwa ngo-1977 kwaye labelwana nabanye abaninzi. Kodwa ngo-2017 eBritish Open, uBranden Grace, kwinqanaba lesithathu kwiRoyal Birkdale, waba ngumdlali ongu-golfer wesibini wokuqala wokudubula ama-62 kwinqanaba eliphezulu.
UGrace wathola i-62 yakhe ngokudubula i-29 ngaphambili phambi kwe-9 kunye no-33 kwinqanaba elithoba.
Kwaye i-29 enye yesithoba kwiBritish Open inkulu, kodwa ayikho irekhodi eli-9. Oko kusengowomntu ogqabiweyo ogama linguDennis Durian, owathi ngo-1983 Ovulekileyo (nakwiBirkdale) wafaka i-28 ngaphambili.
Iholide kunye noMculo weKrisimesi Umculo
Uluhlu lweZikolo zoShishino zaseCalifornia ezilungileyo